Home » Featured » Dobo fiaran-dalamby dinika / Ardis Technologies 'New HyperDDP12D
Dobo fiaran-dalamby dinika / Ardis Technologies 'New HyperDDP12D
Ny votoatin'ny matihanina mpitazam-baovao dia miteraka olana, ary ny zava-misy koa izay azo antoka fa fampisehoana lehibe dia ny lozisialy izay famokarana ny asa-tanana avy amin'ny onjam-peo tsy miankina amin'ny herin'ny famoronana fotsiny. Fa ny tsy maintsy ampidirina ao koa, dia ny hardware no manohana ny fanatanterahana ny famelabelarana. Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies manampahaizana manokana amin'ity sehatra ity, ary amin'ny vaovao iany HyperDDP12D, ny matihanina ao anatin'ny indostrian'ny fahitalavitra dia mahazo antoka fa hahazo mihoatra noho izay nomena azy rehefa miantsena ho an'ny karazan-java-manidina avo lenta izay hanao famelabelarana ho azy ireo.
Ny tantaran'ny Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies mandehandeha miverina any Holandy. Miorina amin'ny Arnhem, ity orinasa Holandey ity dia nanomboka ny orinasa teknika teknika miaraka amin'ny ekipa mpanolo-tsaina, famolavolana rindrambaiko ary injeniera coding, manam-pahaizana manokana amin'ny elektronika, famolavolana ary fitantanana ny vokatra & fampahalalana. Ity ekipa manam-pahaizana ity dia nifantoka tamin'ny famolavolana vahaolana tokana-mijanona ho an'ny vokatra na tetikasa izay mifandraika amin'ny famolavolana elektronika sy / na hardware ary rindrambaiko. Amin'izao fotoana izao Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies dia mitarika ny fifantohany eo amin'ny famokarana sy ny fampandrosoana azy Andian-doka amin'ny dinika dinika.
The DDP Manolotra tetikasa feno sy fizarana fizarana mifototra amin'ny rakitra ho an'ny fampiharana toy mazoto, Fanapahana farany Pro, Fitaovana Pro, EVS, Adobe, Lohasaha, Telestream, Blackmagic design, DVS, Fahitana Digital, Autodesk sy ny fampiharana hafa rehetra misy format video, audio ary horonantsary avy amin'ny DV mankany 8K / DPX. Ny DDP dia azo ampidirina ihany koa amin'ny rafitra MAM sy Backup, ary izany azo itokisana, azo hakiviana ary mora ampiasaina. Ny tsipika vokatra an'ny Ardis 'DDP dia manarona ny filàn'ny orinasa madinika, trano famokarana finday, oniversite ary andrim-pampianarana hatramin'ny orinasan-java-mihetsika lehibe sy orinasa fampielezana. satria Ardis Technologies dia orinasa mitarika teknolojia rindrambaiko, novolavolain-trano ny asan'ny DDP. Ny rindrambaiko rehetra tafiditra ao amin'ny DDP Series dia fananan'ny Ardis Technologies, ary tizy fa DDP no SAN mora indrindra manodidina.
Ardis Technologies 'vaovao HyperDDP12D dia zavatra tokoa ho an'ny matihanina matihanina mba gaga. Ity fitaovana ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra iraisan'ny vahaolana DDP. Manana fantsom-pifandraisana 1GByte / s, ary ampiasaina amin'ny orinasam-pamokarana sy famoahana fandaharana ary ny orinasa Media & Entertainment hafa. Ity dia misy seranan-tsambo 10GbE / RJ45 roa ary slot PCIe 2 fanampiny ho an'ny karatra fitehirizana. Manana fampisehoana SSD haingana indrindra amin'ny an HD fahaiza-manao audio (6000 track), horonantsary (renirano 35x DNxHD220), ary horonantsary (4K, DPX), 2U, 4TB SSD cache, fahaiza-manao 36 TB, seranan-tsambo 10GbE / RJ45, Ethernet SAN.
Isaky ny fanolorana ny famelabelarana matihanina matihanina dia misy ny fahatsapana fahalalàna izay miditra fa tsy ny votoaty ao ambadiky ny asa ihany no tokony ho fiandohan'izany rehetra izany. Saingy ny teknôlôjia ankapobeny ao ambadiky ny famokarana dia tokony hanana kalitao avo indrindra raha te-hanana fiantraikany lehibe amin'ny tsy fananganana marika ihany izy ireo, fa fananganana ny karazana mpihaino izay hiverenan'ny fahatongavana bebe kokoa hatrany. Ardis dia nandray ny andraikitra hisolo tena ny mpanamboatra azy amin'ny fomba tsara indrindra, fa tsy amin'ny HyperDDP12D, fa amin'ny fitambarany Andian-doka amin'ny dinika dinika.
ATEME mazoto fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa matihanina sivy Andian-doka amin'ny dinika dinika Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies Ny rafitra SAN miorina amin'ny Ethernet Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor HyPerDDP12D Litra Matthews vahaolana tokana-mijanona lahatsoratra famokarana SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows Storage Video injeniera 2020-05-13